Mmekorita di omimi ya na ScienceOpen - AfricaArXiv
bipụtara Jo Havemann on 27th January 2020 27th January 2020
ScienceOpen na AfricArXiv na-agbakọ aka ọnụ iji nye ndị na-eme nchọpụta Afrika ohere nwere ọhụụ dị omimi, ịkparịta ụka na mmekọrịta.
Usoro ihe omumu ihe omuma na ebe ekwuputa ScienceOpen na enye oru aka ya na ihe odi mkpa maka ndi biputara, ndi oru ya na ndi nyocha ya, tinyere ihe di n’ime, ihe ndi ozo, ya na njiri ichota ihe.
Obi dị anyị ụtọ na anyị na AfricanArXiv na-enyekwu nhọrọ maka ndị ọrụ nyocha Africa ma nyere aka gosipụta mmụta dị mma a na-emepụta n'ime netwọchọpụta anyị.
Stephanie Dawson, CEO nke ScienceOpen
Dịka onye nyocha, ị nwere ike wulite profaịlụ nyocha 'mepere emepe gị na ScienceOpen dị ka ndị a:
Chọọ ma chọpụta nyocha dị mkpa na ihe karịrị nde 60 Open Access na akụkọ ederede
Ekekọrịta ahụmịhe gị ma nweta otuto site na ịtụle edemede ọ bụla
Kwusara akwụkwọ ozi gị or akwusila kpọkuokwa ndị nyocha dị mkpa ka ha nyochaa ọrụ gị. Soro uzo na igwe ihe ozo maka akwukwo gi.
Mepụta Mkpokọta isiokwu iji gaa n'ihu n'ọmụmụ ihe nyocha gị
Nnakọta ScienceOpen na-enye ndị obodo ohere maka ịkakọ, nkesa na nyocha nke ozi agụmakwụkwọ.
AfricanArXiv na-echekwa nchịkọta nke ScienceOpen AfricanArXiv Preprints nke na-anakọta AfricaArXiv ọdịnaya sitere na nyiwe ndi ozo anyi Mepee Sayensị Sayensị na Zenodo. Site na taa, ịnwere ike ibuputa ihe odide mbido ngwa ngwa gị na ScienceOpen site na Nyefee ihe odide bọtịnụ. Ihe odide gị ga-enyocha nke ọma site n'aka otu ndị otu anyị, ma ọ bụrụ na akwadoro ya, ị ga-etinye ya na ntanetị iji Crossref DOI na CC BY 4.0 ikike ikikere Ozugbo ihe odide gị dị na ntanetị na ScienceOpen ị nwere ike ịkpọ ndị nchọpụta ndị ọzọ na ngalaba gị ka ha dee akụkọ nyocha ndị na-emepe emepe emepe emepe.
Akụkụ ọzọ nke ScienceOpen nyere maka nyocha usoro nha ndị mmadụ mere na ha na-agbakwụnye nnukwu uru maka ndị na-eme nchọpụta na Africa na ụwa niile. Site na isonye na ndị ode akwụkwọ na nchịkọta nke AfricanArXiv, ndị ScienceOpen nwere ike imekọrịta ọnụ, nye nzaghachi ma tụọ aro maka ndozi ederede. Ọ bụghị naanị na nke a ga - eme ka akwụkwọ nnabata dị elu pụta ọfụma, kama ọ ga - emekwa ka mmekorita ga - agafe ókè.
Osman Aldirdiri nke AfricaArXiv
Lelee ma nyocha ndị a AfricanArXiv Preprints mkpokọta na ScienceOpen.
ịmụta otu esi edo onwe ya n'okpuru nye AfricaArXiv site na ScienceOpen.
ScienceOpen bụ usoro nchọpụta ihe omimi maka nyocha ndị ọkà mmụta gafere ọzụzụ niile. Site na njiri mara, nyocha dị iche iche na nyocha nyocha, nyocha ndị ọgbọ, mepee nchịkọta na ndị ọzọ, ọ na-enye ụdị nhọrọ dị iche iche iji chọta ma kesaa nsonaazụ nyocha. | Weebụsaịtị: sayensịopen.com - Twitter: @Science_Open
AfricaArxiv bụ ebe nchekwa ihe nzuzo dijitalụ nke obodo na-ebute maka nkwukọrịta nyocha n'Africa. Anyị na-ewepụta ikpo okwu na-anaghị akwụ ụgwọ iji bulite mpempe akwụkwọ, akwụkwọ ndebiri, akwụkwọ edemede anabatara (post-Mbipụta), ngosipụta, setịpụ data na ọrụ ndị mmekọ ọ bụla. Afrịka AAAxxiv ka enyere aka imepe nchọpụta na imekọ ihe n’etiti ndị sayensị Africa, iji mee ka visibilụ n ’nchọpụta Africa were na-eme ka njikọta ọnụ n’akụkọ ụwa niile. | Weebụsaịtị: africarxiv.org - Twitter: @AfricArXiv
Tags: mmekoritaNyocha ndị ọgbọScienceOpen
Edere isiokwu a na ela-newsportal.com “Nnyocha mmụta na ihe ọmụma sitere na Africa kwesịrị ka ndị niile chọrọ ịnweta, jiri ya ma ọ bụ jigharịa ya n'efu mgbe niile. GỤKWUO…
E bipụtara ajụjụ ọnụ a na zbw-mediatalk.eu na ikike n'okpuru Creative Commons BY 4.0. Enwe na-agụ! Ime ka e nwee nghọta, ohere imeghere na mkparịta ụka zuru ụwa ọnụ na nyocha dị oke mkpa iji mezie mpaghara GỤKWUO…
adipiscing vel, dictum Praesent mi, velit, facilisis porta. luctus